Nylon FDy ee soo saare | Salad Yarn
Guri > Waxyaabaha Yarn > Nylon fdy
Nylon fdy Waxaa loola jeedaa soo bandhigida fidinta hannaanka is-dhexgalka si loo helo dabayl yar oo leh hanuuninta sare iyo wasakhda dhexe, taas oo ah mid si buuxda loo sawiray.
Alaabta noocan ah waxay leedahay adeegyo fara badan oo kala duwan. Waa shey wanaagsan oo beddela birta, bir, naxaas iyo birta kale oo leh caag, oo waa caag injineer muhiim ah; NYLON NYLON waxay si weyn u beddelaysaa qaybo u adkeysan oo qalabka farsamada leh, waxayna ku beddelataa naxaas iyo allyos sida qaybo u adkeysan oo qalab-u adkaysta qalabka. Waxay ku habboon tahay soo saarista qaybo u adkeysan, qaybo qaab dhismeedka ah, qaybo ka mid ah qalabka guryaha, qaybo wax soo saarka baabuurta, qaybaha farsamada ee kahortaga, qaybaha mashiinnada kiimikada, iyo qalabka kiimikada. Sida marawaxadaha, gears, qalabka wax lagu dhejiyo, digir, xargaha, xargaha, xargaha, luuqadaha, xargaha, gacmaha, gacmaha, gacmaha, xijaabka, iwm.
Nylon ayaa inta badan ah shaxdo, waxaana sidoo kale jira qadar yar oo ah fiber-ka jilicsan ee Nylon. NYLON SPARARENT waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo si adag oo loogu talagalay soo saarista sharaabaadyada, dharka, shaati isboorti, iwm.
Nylon FDy Teades oo sarreeya oo ah 150-600d
Salud yan ee tayada ugu fiican ee Nylon FDy Teafy Teafy Teafy Surfy Tealist 150-600D warshad, oo leh qalab tijaabin ah si loo daboolo isuduwidda cusub ee horumarka iyo isuduwidda wax soo saarka ee macaamiisha.
Nylon FDy Teafdevle 600-1200d
Salud yan ugu fiican Nylon FDy The Treavence 600-1200d alaab-qeybiye, kooxda ganacsiga shisheeye ee waaweyn. Waxaan u dhigmi karnaa dhibaatooyin kala duwan ganacsiga caalamiga ah.
Nylon FDy FDY SENENT SENSE 600-1200D
Salud yan ugu fiican Nylon FDY FDY FDS MUST 600-1200d alaab-qeybiye, oo leh qalab tijaabin ah si loo haqabtiro macaamiisha horumarka cusub ee hormarka iyo isuduwidda wax soo saarka.
FDYON FDY FDY SENSENTE 1200-1890D
Salud yayn tayada wanaagsan ee tayada Nylon FDY FDY FD MUST 1200-1890d warshad, xoog badan r& D Koox, waxaan leenahay set dhameystiran oo mashiinno kormeer ah oo loogu talagalay alaabada dhowaan la horumaray.
Nylon xaaladaha xayeysiinta ah ee lown hmls 150-600d
Salal yan ee tayada sare ee NYLON XUNLS YMLS 150-600D Weyn
Nylon FDy Teledy Teacity 1200-1890d
Salud yan afraga ku ah Nylon FDy Telefnat-ka Sare ee Nylon FDY, waxaan dhisnay qaab wax soo saarka soosaarka ee wakiilka dibada, soo dhawow dhammaan wadashaqeynta guud ee guusha ee ay guuleystaan.
Nylon shamal yan hmls 600-1200d
Salud yan ugu fiican NYLON XULMADA LYYN HMLS 600-1200D sicirka warshadda - Salal Yarn, badeecad ayaa loogu tala galay poy, FDY, DYY, qiimaha, qiimaha, qiimaha.
NYYON XULASHADA YARN HMLS 1200-1890D
Salud yan ugu fiican NYLON XUNLS YMLS 1200-180D AWEERAAD, waxay dejisay dhirta rah-biyoodka, oo ay ku jiraan Deyd, Hank Dyed, oo ay ku jiraan qaan gaadhnimada tikniyoolajiyadda.
Nylon Monoofilon Yarn 7-900d
Salud yan ugu fiican Nylon Monnon ee Nylon Monnon 7-900d ee Warshadda - Salal Yarn, oo ay ku dhisantahay dhir u gaar ah, oo ay ku jiraan Dyding, Hank Dyed, Hank Dyed, Cone Dyed.
Nylon FDy DDY Dypedy Cornadity 150-600d
Salud Yarn Woulesale Nylon FDy DDY Dypey Dyy Dypey Dypey Dyy Dypey Dypey Dypey Dyden Qun COPED DYED SUPEDITY SUPERED 150-600D oo leh qiime wanaagsan - Salal Yarn, oo leh qalab imtixaan oo lagu daboolo isuduwidda macmiilka cusub ee horumarinta macaamiisha iyo isuduwidda wax soo saarka ee macaamiisha.
Nylon Monoofiloh Yarn 900-1800d
Salal yan ugu fiican Nylon Monnon Monofilaynta Yeyn 900-1800d alaab-qeybiyeyaasha digaagga ah. Waxaan u dhigmi karnaa dhibaatooyin kala duwan ganacsiga caalamiga ah.
Nylon Fdy Ddy Dypedy 600-1200d
Salud yan ee tayada wanaagsan ee Nylon FDy DDY DYED warshad aad u sarreeysay oo kacsan tahay Telefishanka 600-1200D, badeecad lagu gooyay poy, FDY, DTY, qiimaha, qiimaha, qiimaha.